”Maxaad CL kasoo doonteen miyaydnaan EL doonayn?!!” – Laba kooxood oo isku camirtay! – Gool FM
”Maxaad CL kasoo doonteen miyaydnaan EL doonayn?!!” – Laba kooxood oo isku camirtay!
Raage August 16, 2017
(Istanbul) 16 Agoosto 2017 – “Sevilla, miyaadan doonaynin inaad markale ku guulaysato Europa League?” ayay Twitter ku soo qortay kooxda Istanbul Basaksehir, oo ah kooxda kala baxa Champions League la dheelaysa isla kooxdan reer Andalusians.
Kooxda ayaa sidoo kale soo daabacday 5-tii koob ee ay Sevilla kaga guulaysatey tartanka EL, yeelkeede, kooxda Spanish-ka oo fahamtey duurxulka u dhacaya ”maxaad CL kasoo doonteen reera EL ayaadba tihiine” ayaa jawaabta meel dhow ka keentay.
“May, Mahadsanidiin: Horay baannu in badan u haysannaa, waxaa ka wanaagsan inaad idinku markiinnii 1-aad hanataan.” ayay soo qortay Sevilla, iyadoo labada kooxood toodii kulankan ku harta ay aadayso Europa League oo ah koobka lagu xifaalaynayo kooxda Sevilla.
Madaxwaynaha Faransiiska oo booqday xarunta Marseille & funaanadda Totti oo lagu maamuusay + Sawirro
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: SSC Napoli vs Nice 2-0 (Napoli oo Nice laba ku nustay)